I-Facebook: iividiyo zabavavanyi- iGeofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Facebook: iividiyo ukuba abahloli umhlaba
Facebook: iividiyo ukuba abahloli umhlaba
Ngokunyuka kunye nemida Facebook isiba sisixhobo esiqhelekileyo seshishini kunye nemfundo. Njengokuba "yi-Intanethi yabantu", iinkampani ziye zajonga emva kule ndawo inabantu abadibeneyo, eyinike ixabiso elingaphaya kwenethiwekhi eqhelekileyo. Enye yezona zinto zibalaseleyo kukukwazi ukuthumela iividiyo, ndiyabuthanda ubulula bokuzijonga kwisisombululo esiphakamileyo kunye nokuzithega. Ngesi sihlandlo ndikubonisa umzekelo kumdla wethu ekusebenziseni izixhobo ze-CAD zommandla wobunjineli, eyona nto ndiyibonileyo okoko ndenza kuhlolwa kweAUGI. NguMbutho woPhando lwabafundi beDyunivesithi ezimeleyo yaseSanto Domingo (UASD), ngokucacileyo ngombono omkhulu womntu, ngaphezu kokukhuthaza intsebenziswano yoluntu ngokuqinisekileyo uya kubafumana abalandeli ngokwabelana ngezinto eziphathekayo ezisemgangathweni umsebenzi weklasi kunye nezinye zimpendulo kwiindawo zaseAUGI.
Kuza kubekho amavidiyo angaphezulu kwama-30 kunye nokuzivocavoca okuchazwe isinyathelo ngesinyathelo, ngokubanzi kunye nomsindo kunye nomonde kuze kube yinto exagger kwezinye zazo.
Ulungiso lwezicwangciso, lulapha iindawo ezintathu ngomsindo ongasemva. Ibandakanya iikhonsepthi ezisisiseko njengokusebenzisa imisebenzi ukuguqula iidigri, imizuzu, imizuzwana ukuya kwimitha, kunye netrigonometry esisiseko.
Ukubalwa nxu lumano usebenzisa i-AutoCAD Civil 3D 2011. Kucacisa gca ukubonisa ilahleko kwinkqubo yombhobho.
Indlela yokuyila usebenzisa iiNdlela eziPhakamileyo, isoftware yasimahla. Kukuseshoni ezine, kwaye nangona isoftware indala, isaphila kwaye inakho ukusebenza kakhulu. Kubonakalisiwe kulayisho lwelifu lendawo, ulungelelwaniso oluthe tyaba, ubeko lomgca webakala, kunye nokucwangciswa kweelebheli.
Uhlalutyo lwendawo Kwi-Civil 3D. Kubandakanya ukumiselwa kwezitya kunye nemephu yethambeka.
Uhlalutyo idatha yokufunda kwangaphambili usebenzisa i-Eagle Point nokukhuphela isiseko sokuphakama kwiGoogle Earth csv usebenzisa i-Digipoint IZonum.
Indlela yokuyila usebenzisa i-Civil 3D kwifayile ye-csv. Kubandakanya ukuveliswa kwendawo yomphezulu, ubume obuthe tyaba kunye nokuveliswa kwesityalo seprofayili. Oku kokona kulungileyo, kukho iiseshoni ezili-9 zizonke ezibandakanya uyilo lwecandelo eliqhelekileyo kunye nokuveliswa kwepaseji.
Ezinye iividiyo ziquka:
Indawo yokubala kunye nekhodi yekhosi se benzisa isixhobo seHW
Yakha indawo se benzisa AutoCAD Civil 3D
Yakha indawo se benzisa i-DEM USGS
Khipha amanqaku eCOGO kusuka umgijimi
Ukuqulunqwa komgwaqo wokuqala behla Ikhefu leNqanaba ukusuka kwi-Google Earth ukuya kwi-Civil 3D.
Ikhefu Iinqulunqa ezisentla ngasempuma nakwiimitha ezili-20 nganye
Ukuqaphela iipaliti zamanqanaba eziveliswe kwi-Civil 3D Desktop Desktop. Into efanayo ibonwa kwenye ividiyo ethathiweyo evela kwi-Eagle Point kwi-Civil 3D kunye ne-Global Mapper DEM kuLuntu 3D.
Uboniso kwi-Civil 3D usebenzisa plugins de 3D Studio Max.
La Chascada: Ukuba ucinga ukuba u-Facebook ngumtshangatshangiso wabantwana abalala kwiminyaka yabo yokwenyani ukuba bathethe ububhanxa xa beshiya iiklasi, kuya kufuneka uyijonge kuba ukuba ufuna ukubona iividiyo kuya kufuneka ubhalise. Sakubona apho. Kwaye ezo zinto ebomini, ezikhoyo namhlanje hayi ngomso, akukubi ukuba ukhuphele iividiyo.
3D civil Umhlaba ka-Google
... iintsuku andifuni kudlula ...
Yintoni iTeamviewer-Eyona nto ingcono kwinkxaso ekude
Ing. Ambiorix Tejada C uthi:
Ndikhangele eli phepha labathengi kwaye linomdla kakhulu, ndivuyisana
UJOSE ANTONIO MENDOZA uthi:
BANGAKUNIKULWA IGAMA LOKUBA BENZA KUNYE KWE-FACEBOCK
Igor Risso Rodriguez uthi:
Unomdla kakhulu kwiikhosi, ngokukodwa kwesi siprofeto sokuba kukho into entsha
Armando Antonio Vargas Fuertes uthi:
Disemba, 2013 kwi
Ndifuna ukufunda kwiingoma oshicilelayo, mbulela. ZeMpilo
I-LibreCAD, ekugqibeleni siya kuba ne-CAD yamahhala
Inkqubo ye-3D ye-Civil yemisebenzi yoluntu-Inqanaba 1
Amanqaku, umphezulu nolungelelwaniso. Funda ukwenza uyilo kunye nemisebenzi esisiseko yomgama ngesoftware ye-Autocad Civil3D esetyenziswe kwiTopography ...